Google sy ny fitsaboana azy ireo momba ny mpamorona. Mizotra amin'ny lala-mahitsy ve ianao? | Androidsis
Cristina Torres sary placeholder | | Tutorials
Angamba raha mpampiasa Google ianao, na amin'ny alàlan'ny fitaovany marobe eo amin'ny tontolon'ny motera fikarohana, Google Play, na ireo vokatra sy serivisy hafa, dia hohamarininao irery fa sarotra be ny mifandray amin'ny orinasa. Raha ny tena izy, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia manondro anay amin'ireo tranonkala natao hamaliana fanontaniana izy ireo ary manazava ireo fomba fanao harahina amin'ilay tranga izay tokony hanananao. Fa raha tsy azonao atao ny manamboatra azy dia mety ho lasa iraka tsy azo tanterahina ny fifandraisana amin'ilay mitady. Ary na dia takatsika aza fa misy an-tapitrisany amintsika mampiasa ireo serivisy ireo dia tokony hiavaka ny fifampiraharahana amin'ireo mpandraharaha. Rehefa dinihina tokoa, raha tsy misy azy ireo dia tsy hisy vokatra hamidy amin'ny Google Play.
Fa toa tsy toy izany eo anelanelany ao anatin'ny filozofia Google, ary na dia tsy vao sambany akory ny mpandraharaha iray miantsoantso eny amin'ny habakabaka noho ny fampiatoana ny kaonty raha tsy misy fanazavana fanampiny, na ny fanafoanana ny fampiharana azy miaraka amin'ny iray amin'ireo hafatra mandeha ho azy izay manazava mitovy amin'ny tsy misy, amin'ity In ity tranga ity dia nipoitra indray ny resabe vokatr'ilay fampiatoana ny developer developer Simone Degano, izay vao 19 taona monja dia efa nanana fangatahana marobe hita eny an-tsena. Raha ny tena izy, nanjary be mpitia tao amin'ny tambajotra ny fitarainany ary izany no antony ilainay anio hamerina an'ity olana ity, ary manandrana ny hamahan'i Google ny zava-mitranga faran'izay haingana.
Google, aiza ianao?
Toa ny ny mpandrindra dia mety nahazo ny iray amin'ireo mailaka natahotra avy tany Google izay nanambaran'izy ireo ny fampiatoana ny kaonty noho izy ireo nandika ny politikan'ny Google Play. Ao amin'ny mailaka voalohany alefany aminao, izay nanakanana tamim-pomba ofisialy ny kaontinao, dia asehon'izy ireo fa hahazo fifandraisana vaovao ianao miaraka amin'ireo fanazavana mifandraika amin'ny raharaham-pitsaranao, ka raha tianao ny hamaha azy ireo dia azonao atao izany. Tsy tonga velively ny mailaka ary hatreto dia tsy nahomby ny andrana rehetra nataony. Tonga amin'ny pejy izay tsy mamela anao hifandray mivantana na tsy manome anao hevitra momba ny toerana mety nanoratana ny bibikely ianao. Raha ny marina, raha ny filazany dia tsy maintsy fahadisoana izany satria tsy mino izy fa nanitsakitsaka ny politikan'ny goavam-pikarohana sy ny tontolon'ny Android.
Ny marina dia ny famelana ny tranga manokana efa noresahintsika, tsy ny zava-misy no fotoana voalohany naverina. Tsy azo atao ny mifampiresaka amin'ny motera fikarohana, ary eo amin'ny sehatry ny mpamorona dia mety ho lasa tena olana, satria raha tsy misy kaonty dia tsy misy fampiharana ary raha tsy misy fanazavana dia tsy voavaha ny olana. Ho fanampin'izay dia tsy maintsy tadidintsika fa olombelona ny manao fahadisoana ary indraindray koa ny milina, koa raha sendra naato ny kaontin'ny mpampivelatra noho ny antony tsy tena izy, izany hoe, tsy nahy, ahoana no fomba hamerenan'ity mpamorona azy ity nefa tsy manaraka ny fijaliana sakana tsy ara-drariny izay tsy melokao?
Mazava izany Google Play dia nandroso tamin'ny lafiny maro, fa mbola betsaka ny olana tsy maintsy nohosoran'ny goavambe Android mba handeha tsara ny zava-drehetra, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Google sy ny fitsaboana azy ireo momba ny mpamorona ve ianao eo amin'ny làlana tsara?
Latabatra Tennis Touch, milalao lalao Ping-Pong mahafinaritra amin'ny Android-nao